ဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်း 1990 များနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပိတ်ဖို့ဖြစ်ခြင်း, ကမ်းလွန်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းဖို့ဘဟားမားအမေရိကန်များအတွက်အလွန်လူကြိုက်များတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုတစ်ဦးကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်က၎င်း၏လူကြိုက်များအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာလျှို့ဝှက်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီသောတင်းကျပ်သော privacy ကိုဥပဒေများဖြစ်ကြသည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: 1990 ၏ဘဟားမား '' နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ (IBC) အက်ဥပဒေက၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များ၏ privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဤသည်အက်ဥပဒေဟာဘဟားမားနှင့်မဆိုတစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုအကြား၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်း၏သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းတားမြစ်ထား။
• 20 နှစ်များအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်: ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုပွညျ့စုံ၏နောကျဘဟားမားနိုင်ငံခြားသားများများအတွက်ထောက်ပံ့နောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုအကျိုးအတွက်အနှစ်နှစ်ဆယ်များအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးမှအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်ကိုအခြားနိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံသားများ၏သူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေအစီရင်ခံရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များနှင့်တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: ဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။
• နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများဖိုင်မှမရှိပါ: ဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းအဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိရုံးနှင့်အတူနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာများ file မှမလိုအပ်ပါ။
• ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျင်းပနှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး: သူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာကျင်းပနိုင်ပါသည်အဖြစ်ဘဟားမားမှာသူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးများကျင်းပရန်ဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• လွယ်ကူသောဘဏ်လုပ်ငန်း: အသစ်တစ်ခုကိုဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းကတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့ကဘဟားမားတစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည်။
ဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းကိုအခြားဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူအလားတူမဟုတ်သောအရာတစ်မူထူးခြားတဲ့ကော်ပိုရိတ် name ကို select လုပ်ပြီးရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာအမည်ဖြင့်တူညီ၏အမှု၌နှစျအခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့တစ်လျှောက်မူလတန်းကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ဖြင့်တင်ပြရန်အကြံပြုသည်။
ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်ကောက်ခံမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ ဒါဟာဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းတစ် 0% ကော်ပိုရိတ်အခွန်ပေးဆောင်သည်ဟုဆိုလိုသည် မှုနှုန်း.
ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်စဉ်မှတ်ပုံတင်ကြေး BSD $ 1,100 ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းက "ဘဟားမား၏ဓနသဟာယ" ဟုအဆိုပါ Lucayan ကျွန်းစုတွင်တည်ရှိသည်အဖြစ်ဘဟားမားတရားဝင်လူသိများသည်။ 700 ထက်ပိုကျွန်းများ, islets, နှင့်ဘဟားမားကျွန်းစုတက်အောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲ cays ရှိပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါဘဟားမား" ၏သတ်မှတ်ရေးနိုင်ငံသို့မဟုတ်ပိုကြီးသောကျွန်းကွင်းဆက်မှဖြစ်စေရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကမြောက်ဘက် Hispaniola (ဟေတီနှင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ) နှင့်ကျူးဘား၏တည်ရှိသည်; တူရကီနှင့်ကိုင်းကော့စ်ကျွန်း၏အနောက်မြောက်ဘက်; နှင့်အမေရိကန်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်နှင့်ဖလော်ရီဒါသော့ချက်များ၏အရှေ့ဘက်၏အရှေ့တောင်ဘက်။ ၎င်း၏ပါလီမန်အဆောက်အနာဆော New Providence ကျွန်းပေါ်တည်ရှိသည်။ ဘဟားမားစ်သမုဒ္ဒရာနေရာ 180,000 စတုရန်းမိုင် (470,000 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ကိုဖုံးလွှမ်း။
ဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းဒါလူကြိုက်များအဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းပြချက်ကတော့လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် privacy အစိုးရကထောက်ပံ့နှင့်အခွန်ကနေနှစ်ဆယ်တစ်နှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးလိုအပ်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်အဆင်ပြေစေသည်။ အဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်စွမ်းလည်းအဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်။ ဆွဲသွင်းပါဝင်ပြီးနောက်လွယ်ကူစွာဘဟားမားကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်စွမ်းရည်အခြားအကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။